ဒူဒူကြီး: Ultrasonic Sensors
Ultrasound waves တွေဟာ၊ differing media ဆိုတဲ့၊ object နဲ့ sensor ကြား သို့မဟုတ် boundary ဆိုတဲ့ object ရဲ့ နံရံကို ရိုက်ခတ်ပြီး၊ sensor သို့ uniform medium အနေနဲ့ ပြန်လာနိုင်တဲ့ အတွက်၊ reflected နဲ့ transmitted တို့ အတွက်၊ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။Through-beam သို့မဟုတ် Reflective Sensors တွေမှာ Ultrasonic waves တွေကို သုံးပြီး၊ transparent films, glass bottles, plastic bottles နဲ့ plate glass အစရှိတဲ့၊ objects တွေကို၊ stable detection အနေနဲ့ sense လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
Fig. Ultrasonic Sensors
ဒါ့အပြင် measuring အနေနဲ့ anemometer တွေမှာ၊ လေတိုက်နှုံးနဲ့ လေစီးကြောင်းလားရာကိုတိုင်းတာခြင်း၊ tank တွေအတွင်းမှ ဆီ သို့မဟုတ် ရေလို၊ fluid media ကိုဖြတ်သန်းပြီး၊ level ကိုတိုင်းတာခြင်း၊ humidifiers, sonar, medical ultrasonography, burglar alarms နဲ့ NDT အဖြစ်အသုံးပြုခြင်း အစရှိတဲ့ applications တွေမှာ လည်း၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် materials တွေရဲ့ shape ဆိုတဲ့ ပုံပန်း သဏ္တွန်၊ surface ဆိုတဲ့ မျက်နှာပြင်အနေအထား၊ consistency ဆိုတဲ့ ထူထပ်မှုနဲ့ density ဆိုတဲ့ သိပ်သည်းမှု တို့ အပေါါ မူတည်ပြီး၊ အကန့်အသတ်နဲ့သာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ foam လို အမြှုတ်ပါတဲ့ fluid မျိုးကို တိုင်းတာတဲ့အခါ၊ Ultrasonic Sensors တွေကို အသုံးပြုလို့ မရတာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Fig. UT test
NDT ဆိုတဲ့ non-destructive testing နည်းတွေကို၊ AET - Acoustic Emission Testing, ART - Acoustic Resonance Testing, ET - Electromagnetic Testing, IRT - Infrared Testing, LT - Leak Testing, MT - Magnetic Particle Testing, PT - Dye Penetrant Testing, RT - Radiographic Testing, UT - Ultrasonic Testing နဲ့ VT - Visual Testing (VI - Visual Inspection) ဆိုပြီး ခွဲခြားထားပါတယ်။ NDT တနည်းအားဖြင့် non-destructive testing မှာ၊ UT ဆိုတဲ့ Ultrasonic testing အဖြစ်၊ Ultrasonic Sensors တွေကို အသုံးပြုပါတယ်။
Fig. Types and shapes of detection objects (reflective type)
Industrial application ဆိုတဲ့ စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအတွက် reflective type ultrasonic sensors တွေကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ reflective type ultrasonic sensors တွေကို အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ detected objects အမျိုး အစားအစားအလိုက်၊ ခွဲခြားအသုံးပြုပါတယ်။ detected objects တွေကို၊ Flat-surface objects, Cylindrical objects နဲ့ Powders and chunk-like objects ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ fluids, boxes, plastic sheets, paper နဲ့ glass တို့ဟာ၊ Flat-surface objects တွေဖြစ်ပြီး၊ cans, bottles နဲ့ human bodies ဆိုတဲ့ လူ့ခန္ဓာကိုယ် အစိတ် အပိုင်းတွေကတော့၊ Cylindrical objects တွေဖြစ်ပါတယ်။ minerals, rocks, coal, coke နဲ့ plastic တို့ကို Powders and chunk-like objects အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။
sending နဲ့ receiving ကိုတပြိုင်တည်းလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်၊ Ultrasonic Sensors တွေကို transceivers လို့ လည်းခေါါကြပါတယ်။ Ultrasonic sensors တွေဟာ၊ high frequency sound waves တွေကိုထုတ်ပေးပြီး၊ echo ဆိုတဲ့၊ ပဲ့တင်သံအနေနဲ့ sensor မှပြန်လည်လက်ခံယူပါတယ်။
ပဲ့တင်သံအနေနဲ့ပြန်လာမယ့် receiving signal နဲ့ ထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့ sending signal တို့ အကြားမှ၊ time interval ကတဆင့်၊ sensor ဟာ object ကို detect လုပ် ပါတယ်။ Ultrasound waves တွေဟာ၊ 'C = 331.5 + 0.61 θ (m/s)' ဆိုတဲ့ အလျှင်နှုံးနဲ့ တန်းတန်းမတ်မတ် သွားလာပြီး၊ လှိုင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကတော့ ညီညာတဲ့ uniform medium wave form ဖြစ်ပါတယ်။
'θ' ဟာ လေထုအပူချိန်ဆိုတဲ့ air temperature (°C) ဖြစ်ပြီး၊ လေထုအပူချိန်အပြောင်းအလဲဟာ၊ measurement error ကိုဖြစ်ပေါါတတ်စေတတ်ပါတယ်။ Ultrasonic sensors တွေမှာ temperature-based distance measurement error လို့ခေါါပါတယ်။ Ultrasound waves တွေဟာ frequency ဆိုတဲ့ ကြိမ်နှုံးအနေနဲ့ 18,000 Hz အထက်အသံလှိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ Ultrasonic Sensors တွေမှာ barium titanate transducer တွေကို၊ အသုံပြုပြီး၊ piezoelectric effect မှတဆင့် electrical signal ကို sound wave အနေနဲ့ပြောင်းလဲ ထုတ်လွှင့် ပါတယ်။ sound wave အနေနဲ့ပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်ပြီး၊ echo ဆိုတဲ့ ပဲ့တင်သံအဖြစ်ပြန်လာတဲ့ reflected wave ကို၊ sensor မှတဆင့် electrical signal အဖြစ် ပြန်ပြောင်းလဲယူခြင်းဖြင့်၊ detecting, measuring နဲ့ displaying တို့ကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်။
ultrasound waves တွေဟာ၊ detection object မှတဆင့် reflected wave အနေနဲ့ sensor head ရဲ့ surface ကို ပြန်လာသလို၊ တချိန်တည်းမှာ sensor ရဲ့အနီးအနား နံရံနဲ့ မျက်နှာကျက် မျက်နှာပြင်တွေကို၊ echo အနေနဲ့ သွားရိုက်ခတ်ကာ၊ detection object ထံသို့ပြန်သွားပြီးမှ sensor head သို့ reflected wave အနေနဲ့ ပြန်လာတာ မျိုးလည်းရှိပါတယ်။ reflected wave ဟာ Multi-reflection အနေနဲ့ပြန်လာတာဖြစ်ပြီး၊ ultrasound waves တခု တည်းက double reflection သဘောမျိုး (၂) ခါပြန်လာပြန်လာတာကြောင့်၊ reflected wave အနေနဲ့သွားခဲ့ရတဲ့ အကွာအဝေးဟာ၊ (၂) ဆ ဖြစ်သွားပါတယ်။
maximum detection distance ကို adjust လုပ်နိုင်သလို၊ minimum detection distance ကိုလည်း၊ လိုအပ်သလို adjust လုပ်နိုင်ပါတယ်။ sensor ဟာ၊ maximum detection distance နဲ့ minimum detection distance ကြားမှာ သာ၊ detect လုပ်နိုင်ပြီး၊ detection range တနည်းအားဖြင့် zone limit လို့ခေါါပါတယ်။ detection distance adjustment ပြုလုပ်ရာမှတဆင့် sensor head နဲ့ minimum detection distance ကြားမှာ၊ non-sensitive zone ဆိုတဲ့ uncertainty zone တခုပေါါပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် sensor နဲ့ပိုမိုနီးကပ်လာတဲ့ area ဖြစ်ပြီး၊ uncertainty zone မှာ sensor head configuration နဲ့ reverberations တွေကြောင့်၊ detection မလုပ်နိုင်တာတွေ့ရ ပါတယ်။
sensor ဟာ target object ကို၊ non-directivity transmitter အနေနဲ့ specified sound energy တခုကို လွှင့်ပေးပြီး၊ object ဟာ directivity transmitter အနေနဲ့ sensor သို့ sound output ကိုပြန်လည်ပေးပို့ပါတယ်။ non-directivity transmitter ရဲ့ output နဲ့ directivity transmitter ရဲ့ output ratio ကို၊ directivity gain အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။
frequency နဲ့ vibration ကိုမြင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါ၊ directivity gain တနည်းအားဖြင့် directivity ဟာလည်း ပိုမို စူးရှလာအတွက်၊ sound wave ဖြစ်တဲ့ Ultrasound wave ရဲ့ efficiency ပိုမိုကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ sensor unit ဟာ ultrasound switch အနေနဲ့ directivity ကို၊ (8° ~ 30°) အတွင်းမှာထုတ်ပေးပြီး၊ sound pressure half-angle လို့ခေါါပါတယ်။ sound pressure half-angle ဟာ directivity index ဖြစ်ပြီး၊ traducer ရဲ့ center မှာ ဖြစ်ပေါါလာမယ့် angle ဖြစ်ပါတယ်။ angle ကို တိုးပေးလိုက်တဲ့အခါ၊ directivity ကျဆင်းသွားမှာဖြစ်ပြီး၊ certain point တခုမှာတော့ directivity ဟာပြန်တက်လာမှာဖြစ်ကာ၊ side lobe လို့ခေါါပါတယ်။ half-angle မှာ sound strength ဆိုတဲ့ sound level ကို၊ maximum အနေနဲ့ရနိုင်ပါတယ်။
Horn ဆိုတာကတော့ sensor မှာတတ်ဆင်ထားတဲ့၊ reflector ဖြစ်ပြီး၊ ultrasound waves တွေကို၊ concentrate လုပ်ကာ direction တိကျစွာထုတ်ပေးသလို၊ reflected waves အနေနဲ့ ပြန်လာတဲ့ echos တွေကိုပြန်လည် လက်ခံယူပါတယ်။ sensor horn ရဲ့ shape, traducer ရဲ့ vibration mode တို့ဟာ၊ directivity အပေါါ သက်ရောက်မှုရှိတဲ့အတွက်၊ desired operation range အတွင်းမှာ တတ်ဆင် အသုံးပြုမယ့် sensor unit ရဲ့ shape, operation frequency နဲ့ traducer type တို့ကို မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
electrical signal ကို၊ transducer သို့ pulse အနေနဲ့ပေးသွင်းပြီး waves တွေကိုထုတ်လွှင့်စဉ်၊ frequency ဟာ tranducer ရဲ့ resonance frequency နဲ့နီးကပ်သွားတဲ့အခါ၊ electrical signal ပေးသွင်းမှုကိုရပ်လိုက်ပေမယ့် ultrasound vibration ဟာ၊ reverberation အဖြစ်၊ အချိန်အတိုင်းအတာတခုအထိကျန်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ reverberation အချိန်သိပ်ကြာသွားရင်တော့ sensor ဟာ detection ကိုမဆောင်ရွက်နိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။
Image credit to : http://www.omron.com.au/, http://www.directindustry.com/, http://en.wikipedia.org,/http://www.scienceclarified.com/
Posted by ဒူဒူကြီး at 19:04